Duqa Muqdisho oo codsaday in lagu soo wareejiyo amniga Gobolka Banaadir. – Hornafrik Media Network
Duqa Muqdisho oo codsaday in lagu soo wareejiyo amniga Gobolka Banaadir.
By HornAfrik	 On Dec 22, 2017
Guddoomiyaha gobolka Benaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanka ee gobolka Benaadir si toos ah loo hoos keeno maamulka gobolka si wax looga qabto ammaanka caasimadda.
Maamulka gobolka ayaa xilligan u diyaar garoobay la wareegidda amaankiisa, si loo baajiyo falalka ammaan darrada ah ee Muqdisho ka dhaca. “Ma aha in aan maalin walba daawanno dhibaatooyinka dadka reer Muqdisho ku dhaca oo cadowgu geeysanayo, waxaan la nimin qorshe cad oo isla xisaabtan leh oo aan ammaanka muwaadiniinta ku ilaalineyno, waxaan codsaneynaa in nalaku tix geliyo”. Ayuu Thaabit yiri.
Guddoomiye Jawaari oo warqad jawaab ah u qoray Xeer Ilaaliyaha Qaranka (Akhriso)